Sheekh caan ah oo lagu dilay magaalada Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sheekh caan ah oo lagu dilay magaalada Baydhabo
A warsame 18 January 2015
Mareeg.com: Koox hubeysan ayaa xalay magaalada Baydhabo ku dilay Sheekh Shariif Siidkeey oo ka mid ahaa culimada magaaladaas, isla markaana guddoomiye u ahaa Dallad ay ku mideysanyihiin culimada magaaladaas.
Marxuumka ayaa la tilmaamay in la dilay xilli uu ka soo baxay Masjidka Shariif Gacmeey, halkaasi oo uu ku soo tukaday Salaada cishaha ah, waxaana kooxihii falka dilka ah geystay ay ka baxsadeen goobta.
Ciidamada amniga oo gaaray halka lagu dilay Shariif Siidkeey ayaa waxa ay bilaabeen howlgallo lagu baadi goobayo raggii ka dambeeyay falka dilka ah, iyagoo gacanta ku dhigay tiro dad ah oo laga shakiyey.
Shariif Siidkeey ayaa ka mid ahaa culimada sida weyn looga qadariyo gobolka Baay, waxaana uu Imaam ka ahaa mid ka mid ah Masaajidda ku yaalla magaalada Baydhabo.
Allaha u naxariistee Shariif Siidkeey ayaa la qorsheynayaa in maanta lagu aaso qabuuro ku yaala duleedka Baydhabo, kaasi oo ay ka qeyb gali doonaan mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa horay loogu dilay dad Ahludiin ah, iyadoo dilalkaas lagu eedeynayo labada dhinac ee isku haya Soomaaliya.
Gudoomiyihii degmada Xamarweyne oo xabsiga la dhigay kadibna lasii daayey